Zimbabwe’s former leader Robert Mugabe and his wife, Grace, have travelled to Singapore on their first trip abroad since Mr Mugabe resigned as president last month.
Robert Mugabe granted immunity from prosecution, reports say
Zimbabwe’s former president Robert Mugabe has been granted immunity from prosecution, it has been reported.
The rise and fall of the world's oldest head of state, Robert Mugabe
Africa has been riveted by the drama that led to long-time Zimbabwe president Robert Mugabe's resignation after 37 years in power.
Zimbabwe Parliament speaker says Robert Mugabe has resigned as the country's president.
LATEST: Zimbabwe's ruling party has presented a motion to impeach President Robert Mugabe, seconded by opposition party MDC.